पलले १ करोड दिदा नमानेपछि समीक्षासँग बिवाह गर्ने लिखित सम्झाैता भएको हो? – Dainik Sangalo
पलले १ करोड दिदा नमानेपछि समीक्षासँग बिवाह गर्ने लिखित सम्झाैता भएको हो?
प्रकाशित मिति: शनिबार, कार्तिक ०६, २०७८ समय: १५:२९:१६
काठमाडौं । नायक पल शाह र गायिका समीक्षा अधिकारीको सम्बन्धले फिल्मी बजार तातेको छ । उनीहरुको सम्बन्धले नयाँ मोड लिएको सनसनीपूर्ण खुलासा नेपालको एक चर्चित अनलाइन न्यूज पोर्टलले गरेको छ ।
चितवनमा भएको सुटिङका क्रममा नै उनीहरू ‘रिल जोडी’ बाट ‘रियल जोडी’ बन्न पुगे ।समीक्षासँगको निकटतालाई पलले हल्काफुल्कारूपमा लिएका थिए । समीक्षा भने पलसँगको सम्बन्धमा सि’रियस हुन थालिन् । उनी पहिल्यैदेखि पलकी फ्यानसमेत हुन् ।
उनी पलसँग छुट्टिनै नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेकी थिइन् ।त्यसपछि उनीहरूबीच झ’गडा हुन थाल्यो । समीक्षाले आफ्ना निकटस्थहरूलाई सेयर गरेअनुसार पलले उनलाई भनेका थिए, ‘तिमीजस्तो अफेयर मेरो कतिजनासँग भयो कति ।’उनले अर्की एक म्युजिक भिडिओ मोडलको उदाहरणसमेत दिएर ‘धेरै निहुँ खोजे उसलाई जस्तै अप्ठेरोमा पारिदिनसक्ने’ भनेर समीक्षालाई ध’म्याएका थिए ।
पलको बोली र व्यवहारबाट समीक्षा विक्षिप्त बन्न पुगिन् । एक–डेढ महिनाजति उनले नयाँ गीत गाउन पनि सकिनन् । करिब डिप्रेसनकै अवस्थामा पुगेपछि उनले आफन्त र नजिकका केही साथीहरूलाई आफ्नो पी’डा सेयर गरिन् । सबैसँग सल्लाहपछि निर्णायक कदम चाल्ने निधोमा पुगिन् ।
समीक्षाले पललाई यदि सम्बन्ध तोडेको खण्डमा आफूसँग रहेका फोटो÷भिडिओहरू बाहिर ल्याइदिने र पु’लिस के’ससमेत गर्ने चेतावनी दिइन् । त्यसपछि भने पल हच्किए । १७ वर्षीया समीक्षा उमेरले नाबालिग भएको हुँदा पल कानूनी झमेलामा फ’स्न सक्ने प्रचुर सम्भावना थियो । त्यसैले उनी लचिलो भए ।
स्रोतका अनुसार सुरूमा उनले समीक्षालाई आर्थिक प्रलोभन दिएका थिए । एक करोडको अफर गर्दा समीक्षाले ठाडै अस्वीकार गरिन् । ‘म…‘ हो र ?’ भन्दै कडा जवाफ दिएपछि पल उनीसँग समझदारीमा आउन वाध्य भए ।समीक्षाको मामा पर्ने एक पूर्वगृहसचिवको रोहबरमा उनीहरूबीच विवाहको मौखिक समझदारी भयो ।
उमेरले नाबालिग समीक्षासँगको अफेयर भने पलका लागि महंगो पर्न सक्छ । नाबालिगसँगको सम्वन्धलाई समाज र कानूनले जायज मान्दैन ।साथै, पलले सामाजिक कामहरूमार्फत कमाएको ‘रियल हिरो’ को प्रतिष्ठालाई ‘प्ले व्वाइ’ छविले धु’मिल पारिरहेको छ ।
पलसँगको संक्षिप्त प्रश्नोत्तरः समीक्षा अधिकारी र तपाईंको सम्वन्धको चर्चा व्यापक नै हुन थाल्यो, वास्तविकता के हो ?:::::मैले पनि बाहिरबाट सुनेको हल्ला हो । तर, हामीबीच त्यस्तो केही छैन । हामीले म्युजिक भिडिओमा एउटा टिममा बसेर सँगै काम गरेका हौं । टिममा काम गर्दा नजिक भइन्छ । सँगै बसिन्छ, खाइन्छ । त्यो स्वाभाविक हो । अफेयरको कुरा चाहिँ विल्कुल सत्य होइन । मेरा दु’श्मनहरूले यस्तो नचाहिँदो प्रचारवाजी गरिरहेका छन् ।’
हावा नचली त पात हल्लिदैन भन्छन् नि ?::::::समीक्षाले मलाई अभिभावकको रूपमा सम्मान गर्छिन् । मैले पनि उसलाई सपोर्ट गर्छु । यसलाई गलत नजरले हेरिएकोमात्र हो । समीक्षाले मलाई ‘पल जी’ भनेर सम्बोधन गरेका कारण पनि धेरै मान्छेलाई शंका लाग्यो होला । तर, त्यस्तो केही पनि होइन ।
पछिल्लो समय तपाईंहरू दुवैजना मिडियाबाट तर्किने, प्रेस मिटमा नआउने गरिरहनुभएको चाहिँ किन ? ::::: त्यो कारणले हुँदै होइन । म त विजी भएर नै प्रेसमिटमा नगएको हो । समीक्षा किन नगएको हो उसलाई नै सोध्दा राम्रो हुन्छ । तर, उसले पनि भनेको छ कि त्यस दिन रेकर्डिङ भएकाले जान नपाएको भनेर । हावा तालमा अनुमान लगाउन भएन ।
भविष्यमा तपाईंहरूको विवाहको सम्भावना नै छैन त ?:::अहिले त्यस्तो केही पनि प्लानिङ गरिएको छैन । तर, भविष्य त कसले देख्न सक्छ र ?यति हल्ला चलिसकेपछि आफ्नो तर्फबाट स्पष्टीकरण दिने विचार गर्नुभएको छ ?::::मैले यसलाई ठूलो इस्यू नबनाउँ भनेर कतै नबोलेको हो ।
मेरो पनि फेमिली हुनुहुन्छ, उसको पनि फेमिली हुनुहुन्छ । यस्तो कुराले फेमिलीलाई असर गर्छ भनेर सञ्चारमाध्यमलाई हामीले जथाभावी नलेखिदिन आग्रह गरिरहेका छौं ।समीक्षा त एउटा राइजिङ स्टार पनि हो । उसको भर्खरै बन्न लागेको करिअर नबिग्रियोस भनेर सञ्चारमाध्यम पनि संवेदनशील हुनुपर्छ । यस विषयमा म एक–दुई दिनमा सार्वजनिक रूपमै आफ्ना कुराहरू राख्नेछु ।
(यस विषयमा समीक्षाले भने हामीसँग कुरा गर्न चाहिनन् । उनले आजै टीकटकमा एउटा भिडिओ पोष्ट गरेकी थिइन् । उक्त भिडिओमा उनले ‘कुरा का’ट्ने मान्छेले का’टुन्‘ तर तिमी र म छुट्नु भएन’ बोलको गीतमा लिपसिंक गरेकी छन् । केही घण्टापछि उनले त्यो भिडिओ हटाइन् ।) नेपालप्रेस
Last Updated on: October 23rd, 2021 at 3:29 pm